[Qormo Cajiiba] Shan Qaab Oo Youtube-ka Lacag Looga Samayn Karo [Ka Bogo]
Tuesday 26th December 2017 11:54:10 in Wararkii Maanta by Xarunta Dhexe
Markasta oo aad aragto qof YouTube-ka dhaqaale ka helo ma weydiisaa: "imisaad ka heshaad?"
Evan Edinger oo lacag badan ka sameeyo ayaa sheegay "waxaan dadka u sheegaa qiyaas ahaan. Waxay ku filan tahay in aan kirada guriga iska bixiyo, mararka qaarna aan soo qaato cunto wanaagsan. ma xuma taasi".
Wuxuu go'aansaday in uu sharaxo sida lacagta looga helo muuqaallada la geliyo YouTube.
Wuxuu arrintaasi la wadaagay malaayiinka qof ee daawada muuqaalladiisa YouTube.
1. Ku xiridda Xayeysiimaha
Tallaabada ugu horeysa ee YouTube-ka aad lacag uga heli karto waxay tahay "xayeysiimaha", ayuu yiri.
Qeyb wayn ayey ka qaadaneysaa dhadhanka, laakiin inta waqtiga uu socdo oo ah marka YouTube ay ku lug yeelato, faa'iidada way sii yaraaneysaa.
Evan wuxuu arrintaa ku sheegay xayeysiinta aad aragto ka hor inta uusan kuu billaaban muuqaalka oo dhameystiran ee YouTube aad ka daawato.
Haddii kumannaan ay daawadaan xayeysiinta ku lifaaqan muuqaalka, qofka soo geliyay YouTube-ka waxaa la siinayaa lacag. Qiyaasta waa hal illaa shan dollar.
Balse, dhowaanahan taasi way yaraatay, YouTube waxay qaadaneysaa boqolkiiba 50, dhaqaalaha guud ee laga helo xayeysiinta, sida uu sheegay Evan.
Laakiin wuxuu sheegay in haddii si fudud aad u sameyso muuqaalka oo qiyaas ahaan hal milyan oo qof ay daawadaan, waxaa laga heli karaa $1,000 illaa $5,000 oo dollar.
Dadka YouTube-ka muuqqaallada geliyo waxay isticmaalaan wax loo yaqaano patreon, sida uu sheegay Evan.
"Ka fikir sida in ay tahay sirta yar ee Online-ka," ayuu yiri.
"Waad arkeysaa muuqaalka, haddii aad jeceshahay ama haddii aadan ka helinba, laakiin haddii aad jeclaato, aadna doonayso in aad taageerto, waxaad bixineysaa hal dollar muuqaalkiiba, ama hal dollar bishii".
Qaar ka mid ah dadka YouTube-ka ku xiran waxay sameysteen meel iyaga u gaar ah, halkaas oo macaamiisha lacagta bixisay ay ka heli karaan muuqaallo gaar u ah.
"Waxaan patreon isticmaaalayay muddo sannad ah, daawadayaasha lacagta bixiyay ayaa arki karaan muuqaalladeyda, xilli hore ayeyna daawadaan. Mararka qaar su'aalo ayey i weydiiyaan. Way fududahay, mana filayo waxkale", ayuu yiri Evan.
3. Ku xir lifaaqyo kale
Lahaanshaha sawirkaFLEUR DE FORCE / YOUTUBE
Image captionFleur De Force oo lifaaqyada muuqaalladeeda dhigto Website-yada si dadkaa ay u iibsadaan waxa ay xayeysiineyso.
Tani waa in ay noqoto wax la xiriiro dharka iyo waxyaabaha dumarka ay isku qurxiyaan. Waana xilliga ay YouTube arrintan si gaar ah ugu xiraan alaabaha kala duwan ee qoraalka la socda, waxayna u furaayaan waddo ay ku sii socdaan oo xayeysiin ah.
"Ma ahan oo keliya in ay ku faraxsan yihiin xayeysiinta, balse waxay helayaan saami gaaraya 5-20 boqolkiiba," ayuu yiri Evan.
Marka waa ka mahadcelin ah in alaabta ay dadka kale gaarsiiyeen. Haddaba, haddii aad alaab ka iibsato bar internetka ah oo aad ka aragtay lifaaqa YouTube-ka qof kale, waxay u badan tahay in ay lacag ka helaan.
Image captionZoella waxay buugiiga isqurxinta daabacday 2014-kii
Alaabta kala duwan sida barfuunnada, dahabka, dharka, dahaarka ama qolofka telefoonnada iyo waxyaabo kale, dadka YouTube soo geliya waxay ka helaan lacag badan. Tani uma baaahno sharaxaad dheeraad ah.
5. Xayeysiinta shirkadaha
Lahaanshaha sawirkaFUNKEE BUNCH / YOUTUBE
Image captionFunkee Bunch waxay haystaan in ka badan 4 milyan oo daawadayaan, waxayna xayeysiiyaan Game-ka lagu shubto telefoonnada.
Heshiisyada shirkadaha waa waxa ay Dadka YouTube-ka ku xiran ay lacagta ka sameeyaan, ayuu yiri Evan.
Waa xilliga ay shirkadaha lacagta siiyaan dadka YouTube-ka ku leh taageerayaasha badan, si ay muuqaal ku saabsan alaabtooda u sameeyaan. Waxaa loogu bedelaa taasi dhaqaale ad u badan.
"Waxaad ka heli kartaa lacag 12 jeer ka badan midda laga helo xayeysiimaha kale ee lagu xirto muqaallada ee loo garanayo AdSense. Taasi waxay kuula muuqataa la yaab, balse waa run", ayuu yiri Evan.
"Nin aan isla deggannahay wuxuu heshiis $20,000 oo dollar ah ka helay shirkad uu magaceeda u xayeysiiyay," ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Wuxuu sheegay in midda ugu wanaagsan ay tahay heshiiska iyaga loogu ogolaanayo in ay wax u sameeyaan. Waxayna sameeyaan muuqaal aysan shirkadaha sameysan karin iyaga la'aantood.
Ogeeysis Shaqo Suxufinimo Oo Ka Banaan Telefishanka Qaranka Somaliland Xaruuntiisa London UK Oo ah Mid aan joogto ahayn
Suldaan Barkhad Oo Munaasibad Qurux Badan Looga Qabtay Bariga London Iyo Hadalo Duur Xul Ah Oo La Jeediyay [SAWIRRO]
Xukuumada Oo Shaacisay Inay Soo Gaadhay Lacagtii Imaaraadka Ee Baanka Dhexe Lagu Kaabayay Awoodiisa
Suldaan Hadda Lacag Dhan 4000 Oo Doler Ku Wareejiyay Deegaanka Lughaya Iyo Cidda Lacagta Soo Dirtay Oo La Shaaciyay [Muu
Somaliland cusub, Garxajis cusub iyo dawlad wasiiradeedu siyaasada ku cusub yihiin Sidee looga badbaadayaa? [Eng Farxaan
Xildhibaano Soo Bandhigay Dalalka Lagu Tagi Karo Baasaboorka Somaliland [Waa Immisa Dal?]
Dibadbax Looga Soo Horjeedo Booqashada Trump Ee Britain Oo Ka Dhacay London
Shan Astaamood oo Hogaamiyeyaasha Wanaagsan Lagu garto.
Kooxda Dowladda Islaamka Oo Sheegatay Mas'uuliyadda Weerar Ka Dhacay Kaabuul Iyo Khasaaraha Ka Dhashay
Wadahadallo Midho Dhal Ah Ayaa Dhex Maray Maraykana iyo Kuuriyada Woqooyi
Madaxweynaha Maraykanka Oo Sheegay Colaad U Bilaabantay Dalkiisa Iyo Midowga Yurub
Waddanka Talyaaniga Oo Ka Farxiyay Dadkii Soo Galootiga Ahaa Iyo 450 Ruux Oo Loo Sheegay .
Maxaadiradda Saaka Iyo Karin News [Waysadda Aan Jabin] Waxa Soo Jeedinaya Sheekh Shibli
[Daawo Live:-] Sheekh Dirir Oo Si Weyn Ula Dar-daarmay Ergada Nabadda Ceelafwayn Iyo Hadalkii Ugu Dambeeyay Oo Uu Dhegaha Ugu Riday
Maxaad Ka Taqaana Taariikhda Jeel Ogaadeen Iyo Goorta La Aasaasay, Mase Ogtahay In Madaxweynihii Dhisay Isaga Lagu Xidhay?
[Daawo Warbixin] Halkay Ku Dambaysay Tabashadii Beelaha Gobolka Awdal Ay U Gudbiyeen Xukumadii Hore Ee Kulmiye